Wareysi Xoghayaha Gaashaandhigga Kenya - BBC News Somali
Wareysi Xoghayaha Gaashaandhigga Kenya
Xoghayaha Gaashaandhigga Kenya, Raychelle Omamo ayaa wareysi ay siisay BBC mar ay maanta soo booqatay Istuudiyaha London waxay kaga hadashay hawlgalka ciidankeeda ee Soomaaliya iyo suaalo kale oo la xiriira eedeymaha loo soo jeediyay.
Wareysiga oo Af-ingiriisi ahaa ayaa lagu weydiiyay su'aal ku saabsaneyd waxa ay ka leedahay dalabka qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee inay ciidankooda Soomaaliya kala baxaan – waxay ku jawaabtay.
“Kenya waxay qayb ka tahay AMISOM - waxaanan ku shaqeynaaa tilmaamooyinka AMISOM iyo aragtida hawlgalka AMISOM. Soomaaliya iskama joogno uun, waxaan halkaas u joognaa Midowga Afrika iyo Beesha Caalamka oo taageereya dadaalkeena ku wajahan dejinta dalka. Waan garawsanahay waxa la sheegay ee ay siyaasiyiintu ay yiraahdeen. Siyaasiyiintu wax badan ayay yiraahdaan - laakiin waxaan u malaynayaa in ay tahay mid adag sidii looga bixi lahaa xaalad cakiran oo aan degeneyn sida tan Soomaaliya."
Waxaa kale oo ay sheegtay Raychelle Omamo in ay ku sii jireyaan AMISOM ilaa AMISOM ay ka gaarayso ujeedooyinkeeda, isla markaana ay sii wadi doonaa hawshooda ku wajahan nabadda iyo degenaanshaha gobolka sida hadalka ay u dhigtay.